Brezila: fahatsiarovana an’i Ayrton Senna, Tompondaka F1 tsy nety resy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2009 8:43 GMT
“Ayrton Senna da Silva. Velona tsy mety resy, maty tsy misy mahasolo voasolo”, hoy ny iray amin'ireo vohikala maro mahatsiaro ilay intelo tompondaka erantany tamin'ny Formule 1, ary nanohina an'i Brezila sy izao tontolo izao ny fahafatesany tamin'ny voalohan'ny volana mey 1994. Nitari-dalana nandritra ny Grand Prix de San Marino 1994, tsy nahafehy ny fiara nentiny i Senna ka nampisosa azy teo amin'ny fiolahan'i Tamburello. Niteraka alahelo lehibe teo amin'ny mpankafy azy ny fahafatesany,raha vao 34 taona monja izy ka mbola isaonany hatrany 15 taona aty aoriana.
Ny anaran'i Ayrton Senna amin'izao fotoana izao no anisan'ny be mpametraka indrindra ao amin'ny Andavanandro breziliana ao amin'ny Twitter. @biellebrunner ohatra namoaka sary iray mampiseho ny famangiana nataony teo amin'ny tsangambato teo amin'ny toerana nahafatesan'i Senna, teo amin'ny fiolahan'i Tamburello. Vinicius Cordeiro [pt] tamin'ny fiandohan'ny herinandro no iray tamin'ny nahatsiaro ny fahafatesany voalohany tamn'ity taona ity. Hoy izy hoe:
Tsy irery i Cordeiro mijery fahitalavitra indray alahady izay maizina indrindra teo amin'ny tantaran'i Brezila. Nahita ny fahafatesan'ilay Aotrishiana Roland Ratzenberger i Imola iray andro monja mialoha ny loza nahazo an'i Senna. Tsy misy very ao amin'ny fahatsiarovan'ny olona maro ny sary, ny fialan'aina, ny hirifiry niainana. Hoy i Guilherme Tsubota [pt] mahatsiahy ity andro mahory ity:
Nanararaotra nahatsiaro ny rainy izay fan(ina) an'i Senna sady misy fifanandrifian-javatra mahagaga mampanakaiky ny rainy amin'ny maherifony i Eduardo P.L [pt]. Ho an'ity mpamaham-bolongana ity dia kamban'alahelo no iainany:
Ricardo Vieira [pt] no manazava ny tsy fahafaha-mionon'ny olona anarivoarivony teo ampahalasanan'i Senna:
15 taona no lasa, fa nasehon'ny Birao Breziliana misahana ny antotanisa sy ny fitsapana ny hevitry ny olona fa i Ayrton Senna hatrany no be mpankafy indrindra eny fa na dia ho an'ireo taranaka taty aoriana tsy nahalala azy fahavelony sy nanaraka ny asany aza: manakaiky ny 400 ny tanora anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 19 taona no saiky niteny avokoa fa i Senna no mpanao fanatanjahantena ankafiziny indrindra. Tahaka an'i Pele, dia nanome faharisihana ny Breziliana hanana fanajana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Senna. Eo anatrehan'izany dia mino i Alan Ferraz [pt] fa ny lova tsara indrindra napetrak'i Senna dia ny nahafahan'ny Breziliana mirehareha. Mihetsi-po izy eo am-pahatsiarovana azy:
Asehon'ny gazety ho miavonavona sy mpihatakataka, mirona kokoa ho amin'ny fandresena fa tsy amin'ny fiaraha-mientan'ny mpitia fanatanjahantena, nampiady hevitra ihany koa ity mpanamory ity teo anatrehan'ny mpijery. Nefa samy nahatsapa ny rehetra, ary tafiditra amin'izany ny tsy mpankasitraka azy loatra tahaka an'i Wilton Sturm [pt], fa tsy mbola nisy aloha ny tahaka an'i Senna:
Namoaka andian-dahatsoratra manokana ho fahatsiarovana an'i Senna ao anatin'ity voatsonga ity i Ricardo César [pt]:
Namoaka lahatsarin'ny fotoana tsara indrindra tamin'ny nataon'i Ayrton Senna ny mpampiasa YouTube aheutohmaluko, ary nampiarahany tamin'ny hira izay nanakoako isaky ny alahady maraina tany Brezila. Mpampiasa hafa koa i 1958misterLotus1994 namoaka ny lahatsarin'ny Loka Lehibe Belza 1985 izay no tantarain'i Senna tenany tamin'ny teny anglisy. ny tenin'i Ayrton Senna di notsongaina tao amin'ny Wikiquotes. Ny sary kosa dia nalaina tao amin'ny vohikala Ayton-Senna.net sady efa azon'ny rehetra isintonana atontankevitra.
Ny sary rehetra nalaina tamin'ity lahatsoratra ity dia nalaina avy amin'ny habaka efa tsy misy intsony. Toy izao ny momba azy ireo:
Matoky izahay fa napariaky ny birao mifandray amin'ny fanaovan-gazetin'ny ICN/Marlboro McLaren/Renault ireo sary ireo ho ampiasain'ny fampahalalam-baovao. Raha misy ny zavatra mety ifandirana momba ireo sary ireo dia miangavy hampiasa ny lasitra ifandraisana raha handefa mailaka ho ahy dia hanala ireo sary ireo aho.